ဗဟုသုတ Archives - POPPIN NEW
ကလေးဆန်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ချစ်သူကောင်မလေးတွေရဲ့ အပြုအမူ(၇)မျိုး … ချစ်သူစုံတွဲတစ်တွဲမှာ နှစ်ယောက်လုံးက ကလေးဆန်ပြီး မရင့်ကျက်ဘူးဆိုရင်လည်း မကောင်းသလို၊ နှစ်ယောက်လုံးက ရင့်ကျက်လွန်း၊ တည်ငြိမ်လွန်းနေရင်လည်း ပျင်းစရာ၊ငြီးငွေ့စရာကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ တစ်ယောက်ကရင့်ကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်က ကလေးဆန်ပြီးဆိုးနွဲ့တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုရင် အရမ်းလိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲလေးလို့ပြောရမှာပါ။ ဒီတော့ သင်တို့စုံတွဲမှာ သင့်ကောင်မလေးက ကလေးဆန်ပြီးချစ်စရာကောင်းလွန်းတဲ့သူဆိုတာသိနိုင်မယ့် အချက်လေးတွေကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ (၁) အရာအားလုံးသိချင်တယ် … ကလေးဆန်ပြီးဆိုးတဲ့ကောင်မလေးတွေဟာ သူတို့ချစ်သူကောင်လေး ဘယ်သွားတယ်၊ ဘာလုပ်တယ်၊ …
Pop Pin New August 2, 2019
ရင်နာတယ် အဖေ့သားလေးရေ၊ ငါ့သားလေး မသွားချင်ပါဘူးလို့ ခဏခဏပြောနေတဲ့ကြားက အဖေတို့ခေါ်သွားမိခဲ့ တာလေ ဒီလိုတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကို အဖေသားလေး ကြိုများသိနေသလား သားလေးရယ်၊ သားရယ် အဖေတို့က ကောင်းစေချင်တဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဒီနေရာကိုခေါ်လာခဲ့မိတာပါ ငါ့သားရယ်၊ ဒါပေမဲ့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာခဲ့ပဲ မမျှော်လင့် ထားတာတွေဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ငါ့သားရယ်။ အဖေ့သားလေးလည်းပါတယ်လေ ခွဲစိတ်ဆရာမကြီး ဆီသွားတွေ့တော့ သူကပြောတယ်လေကွာ သားရဲ့ရောဂါက အူလမ်းကြောင်း အာရုံကြောအားနည်း နေတာတဲ့ …
Online ပေါ်မှာ ဘယ်တော့မှ မတင် သင့်တဲ့ Relationship နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အရာ (၁၂) ချက် ကိုယ့်ရဲ့ relationship အကြောင်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာ ပိုစ့်တင်ခြင်းဟာ သာမာန် ကိစ္စသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စုံတွဲတိုင်း သတိထားရမယ့် အချက်က ဘယ်အရာတွေ ကိုတော့ မျှဝေသင့်ပြီး ဘယ်လိုအရာတွေကို မမျှဝေသင့်ဘူး ဆိုတာကိုပါ …
စိတ်​​ပျော်​ချင်​ရင်​ ..ယောကျာ်းယူပါ …!!
စိတ်​​ပျော်​ချင်​ရင်​ ..ယောကျာ်းယူပါ …!! အလုပ်မှာမကျေနပ်သမျှ သူ့ကိုမဲလို့ရပါတယ်… ပျော်ရွှင်လာတာရှိရင် သူ့အပေါ်အားရပါးရခုန်တက်လို့ရပါတယ် နေမကောင်းခဲ့ရင် အသားကုန်ချွဲ ရေသာခိုလို့ရပါတယ် ထမင်းစားပြီး ပန်းကန်ဆေးဖို့ပျင်းရင် ခြိမ်းခြောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ် ဗိုက်ဆာတဲ့အခါ Mini mart မှာ တူတူအသင့်စားလို့ ရတာတွေ ထွက်ဝယ်လို့ရပါတယ် လကုန်လို့ကိုယ့်လခမလောက်ရင် သူ့လခကို ရုပ်တည်နဲ့ ကိုယ့်ဟာလုပ်ပစ်လို့ရပါတယ် ကိုရီးယားကားကြည့်ရင်း မင်းသားကိုအသည်းယားရင် ဘေးကသူ့ကို ကိုက်လို့ရပါတယ် ရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်အင်္ကျီမျိုးဝတ်ရင်လည်း …
1.8.19 ရက်နေ့ ထိုင်းထီပေါက်ဂဏန်းများ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ
အောက်တွင် ထိုင်းထီဖွင့်ပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု့ပါရန် ထီထိုးပြီး ထီတစ်ခါမှ မပေါက်ဖူးတဲ့သူများ အတွက် ထီပေါက်စေသော နည်း ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်စိတ်ဝယ်ထုံ “ဗုဒ္ဓေါ” ဂုဏ်ပွား ကောင်းကျိုးများ (၁) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော ရေအိုးတစ်လုံးအား (မိမိနေအိမ် ဘုရားကျောင်းဆောင်တွင်ထားရှိရန်သင့်တော်မည့်အရွယ်) ရေအပြည့်ဖြည့်ကာ…. (က) အင်္ဂါနေ့ နံနက်/ည ၆-နရီ ၁၀-မိနစ် မှ၇-နာရီ ၂၀-မိနစ် အတွင်းဖြစ်စေ (ခ) စနေနေ့ …
(၆) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံတိုက်ရန်
(၆)ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီပေါက်စဉ် အပြည့်အစုံတိုက်ရန် (၆)ကြိမ်မြောက် ၁၀၀၀ တန် ထီပေါက်စဉ် သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး မ- ၇၁၄၂၉၁ သိန်တစ်သောင်းအထူးဆု ကက- ၉၈၆၅၄၅ သိန်းငါးထောင်အထူးဆု ဎ- ၃၁၂၀၇၅ င- ၆၄၈၄၉၆ သိန်းနှစ်ထောင်အထူးဆု င- ၈၄၁၁၂၇ န- ၈၂၈၇၆၁ ဓ- ၆၃၂၄၅၀ သိန်းတစ်ထောင်အထူးဆု ဎ- ၃၁၈၉၄၉ …
Pop Pin New July 31, 2019
(၄)နှစ်သမီးလေးရဲ့ မအင်္ဂါထဲကို မျှော့ဝင်ခဲ့ပုံကို မိဘများဆင်ခြင်ဖို့၊ ပြန်လည်ဖွင့်ဟခဲ့တဲ့မိခင် ထိုင်းနိုင်ငံက အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးဟာ သူမ သမီးရဲ့အဖြစ်ကို အခြားမိဘများဆင်ခြင်နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ပြန်လည် အသိပညာပေး ဖြန့်ဝေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ သူမရဲ့သမီးမှာ အသက်(၄)နှစ်သာရှိသေးပြီး၊ မအင်္ဂါထဲကို ဝင်ခဲ့တာပါ။ မိုးရာသီမှာ ခြင်နဲ့ အခြားအင်းဆက်အန္တရာယ်တွေဟာ သတိထားစရာ ဖြစ်သော်လည်း၊ မျှော့လို သွေးစုပ်ရေနေသတ္တဝါကိုတော့ မေ့ထားကြမယ် …
ဒီအဖိုးရဲ့သမီးနဲ့ ဆွေမျိုးတွေတွေ့ရှိအောင် ဝိုင်းဝန်း ရှယ်ပေးကြပါ…
သူငယ်ချင်းတို့ရေ ကူညီကြပါနော် ဒီအဖိုးရဲ့ ဆွေမျိုးတွေတွေ့ရှိအောင် ဝိုင်းဝန်း ရှယ်ပေးကြပါ မြောက်​ဥက္ကလာပ ကြိုးတံတားအဆင်းမှာ​နေတယ်​။ က္ကုန္ဒာလမ်း မှာသမီး ရီရီမြင့်​နေတယ်​ဟုသာ​ပြော​သော အဖိုးတစ်​ဦးအား ဒဂုံအ​ရှေ့ မဓ​ကျေးရွာ ယခု ၅၂ရပ်​ကွက်​​ ရေအိုင်​ထဲတွင်​​တွေ့၍ကယ်​ဆယ်​ထား ယခု မ/ဥ​ဆေးရုံသို့ပို့ရန်​ပြင်​​နေပါသည်​။၎င်းအဘိုးအားသိရှိပါကမိသားစုကိုဆက်​သွယ်​​ပေးပါရန်…လေးစားစွာဖြင့် တောင်းဆိုပါရစေ… သနားစရာကောင်းလိုက်တာဗျာ ဘယ်လိုဖြစ်ပီး ရောက်လာတယ်တော့မသိပါဘူး…သူ့သမီးတွေ့မြင်သွားအောင် ၀ိုင်းဝန်းရှယ်ပေးကြပါ… ပြန်လည်တွေ့ဆုံသွားရင် ကုသိုလ်ရပါတယ်…. ……………………….. unicode သူငယျခငျြးတို့ရေ …
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံး နေဝင်ချိန် ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့သူ ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ လူသားတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ သူ့အကြောင်းကတော့ဒီလိုပါ။ လူ့လောကမှာသူ့ကိုမွေးဖွားလိုက်ပြီး (၅) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့ဖခင်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်။ ဖခင်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်း သူ့မိခင်က အလုပ်ထွက်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ (၁၂) နှစ်သားအရွယ်မှာ သူ့မိခင်က နောက်အိမ်ထောင်ပြုလိုက်တယ်။ သူ့ပထွေးရိုက်နှက်နှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်ကို နောက်ကွယ်မှာခံခဲ့ရတယ်။ (၁၄) …
ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်မိတာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်.. ဆရာတော်ကြီး စိတ်ထိခိုက်ပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားမှာကိုပဲ
ယူနက်စကိုနဲ့ပက်သက်ပြီ အထင်မှားနေသော်လည်း ဘာသာသာသနာအတွက် အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပါ။ ဆယ်ဘဝ မမီနိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ရဖို့ရာ ၂၀၁၀-၁၁လောက်ကထဲက အတော်လေးကြိုးစားခဲ့ရတယ် ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေ အတော်လေးအားစိုက်ကြတယ် အငယ်တွေကနေ လူကြီးတွေအထိ ပင်ပန်းခဲ့ကြတယ် အချိန်တွေ ငွေကြေးတွေအများကြီးသုံးစွဲခဲ့ကြရတယ် ခုဆို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ၂ခုတောင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ ဆက်လက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဇွဲမလျော့ပဲ ၂၀၂၀ခုနှစ်မှာမြောက်ဦးကိုကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ် လာမယ့်စက်တင်ဘာလမှာ မူကြမ်းတင်နိုင်ဖို့ရာ ၈၀ရာခိုင်နှုံးကျော်၉ …